Dzidza origami uye origami nezvakanakisa zviwanikwa - Ikkaro
kudzidziswa >> Origami kana origami
Origami kana origami
Origami… mapepa emapepa uye akawanda asingabviri manhamba.
Sezvo ini ndaive mudiki ndanga ndichifarira origami kana hunyanzvi hweOrigami. Ndinoyeuka maitiro andaigadzira mapepa angu, mabhazi nematangi emauto angu. Semwana mudiki ndaizvida.
Asi isu hatingotaure nezvezvinhu zvakaoma. Tinoda kuratidza kuti origami inogona kuve yakapusa uye yakanaka kune vadiki vari mumba. Kutsvaga origami yevana? Ndiri kugadzirira chikamu kuitira kuti vana vako vagone kuita gumi nemaviri manhamba nhanho nhanho.
Mapepa ndege, magwa, uye mhuka pakati pevamwe vazhinji.
ndofunga ndege dzemapepa Iyo inofanirwa kuve, pamwe chete neuta uta, imwe yekutanga kana isiri iyo yekutanga kusangana kune chero munhu ane origami. Kana iwe uchifarira, unogona kugadzira akawanda marudzi emhando dzendege mapepa, uye kushamisika vana pavanokukumbira kuti uite imwe. Ndakatanga nendege uye ndagadzira mhando zhinji dzendege dzendege.
Kumwe kwekushaya simba kwangu, kunyangwe kushandirwa kushoma, imhuka dzemapepa.
Semazuva ese, akawanda mafambiro akavhurika kuti aongorore uye kudzidza. Ruzivo rwakawanda kuti ndikuratidze pane iyo blog uye kuti iwe unonakidzwa nayo zvakanyanya seni.
Maitiro ekugadzira Star Wars echando
Kisimusi ino ichave yakasiyana, ndinayo yakajeka zvachose. Iko kushongedza kweKisimusi pamba ndega ndega. ... Ramba uchiverenga
For the vanoda origami kana Origami tinounza matatu emahara mapurogiramu ayo ane zvishoma maitiro anozokutora iwe kuenda kune imwe nhanho ... chimwe chinhu senge Origami Jedi
Tsuro yakapfuura muenzaniso we zvinogona kuwanikwa.
Icho chiri pamusoro
Nzira yekugadzira pepa glider
Zvimwe plane zvimwe zvekuunganidza mapepa ndege isu tiri kugadzira.
Icho chiri nyore glider rakagadzirwa nebepa.
Maitiro ekugadzira pini pini
Yakanyanya kukosha uye yakatwasuka, asi ini ndinofunga iyo origami kana origami ndinofanirwa kunge ndichiita sekugadzira pini.
Mufananidzo uyu unonyatso kuupfupisa,
Mufananidzo wakatorwa kubva Nyika yePaliku
Nzira yekugadzira pepa crab
Yange iri nguva yakareba kubvira patakange tine chiitiko chekutanga, saka nhasi tinokuunzira kugadzira gakanje repepa. Isu tinonyanya kuwana mhando mbiri dzegakanje mhando. Sarudza iyo yaunofarira zvakanyanya. Ndinosiya mavhidhiyo akati wandei
UPDATED. Ndakashandura mavhidhiyo ekutanga andakatumira muna 2010. Kune mavhidhiyo akawanda uye ari nani nhasi, uye anowirirana nemhando dzakasiyana dzemapepa emapepa. Saka ndagadziridza chinyorwa nevashoma vandakafarira. Nakidzwa nazvo
Asi ini ndinokuyambira kuti iyo nhanho yechiitiko ichi iri yepakati-yakakwira, saka usaore moyo ;-) Mumavhidhiyo iwe unogona kuwana yakadzvanywa nhanho nhanho kune yayo modelling. Kana iwe ukapinda kana kuti usina danho rakajeka, unogona kumisa vhidhiyo. Iko kubatsira kukuru.
Nzira yekugadzira pepa repamba helikopta
Kupfuurisa helikopta ndinofunga ndeyayo pepa autogyro. Asi ndainakidzwa. Tinogona kutaura kuti zvinoenderana nembeu dzemaples, asi izvo zvatova fungidziro dzangu.
Nyowani Guinness rekodhi yenguva yekubhururuka yendege repepa
Kupinda kwakagadziridzwa kusvika 27-11-2017 Ini ndinowedzera zvinyorwa zvitsva zvakawanikwa mukubhururuka kwendege dzebepa mumakore ano. Zvinyorwa zve ... Ramba uchiverenga